၁၀ တန်းဖြေအပြီး ကျောင်းသူလေးရဲ့ ရင်နင့်စရာဖြစ်ရပ်...! - Thadin
HomeNEWS၁၀ တန်းဖြေအပြီး ကျောင်းသူလေးရဲ့ ရင်နင့်စရာဖြစ်ရပ်…!
၁၀ တန်းဖြေအပြီး ကျောင်းသူလေးရဲ့ ရင်နင့်စရာဖြစ်ရပ်…!
March 16, 2019 Admin Kwee NEWS Comments Off on ၁၀ တန်းဖြေအပြီး ကျောင်းသူလေးရဲ့ ရင်နင့်စရာဖြစ်ရပ်…!
၁၀တန်းစာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှ စာမေးပွဲဖြေပြီးလို့ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ဘားအံမြို့ရသေ့ပြန်ဂူသွားရောက်စဉ် ဂူတောင်ပေါ်မှကျောက်ခဲပြုတ်ကျပြီး မမြင့်မြင့်သူအား ထိမှန်သွားရာ ဘားအံဆေးရုံမှ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့သွားရောက်ကုသသောလဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်၍ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်..
ကျိုက်​မ​ရောမြို့နယ်​ ပိန်းနဲကုန်း​ကျေးရွာအုပ်​စု ကင်းစုရပ်​မှ ကွယ်​လွန်​သူမမြင့်​မြင့်​​မော်​(အ.ထ.က ပိန်းနဲကုန်း ဒသမတန်း) အသက်​ (၁၆)နှစ်​ကိုလူမှုကူညီ​ရေးအသင်း (ပိန္နဲကုန်း)က ကွယ်​လွန်​သူနှင့်​ဆိုင်​​သောအသုဘကိစ္စရပ်​များကို ကုသိုလ်​ပြု​ဆောင်​ရွက်​​ပေးခဲ့ပါသည်​…
လူမှုကူညီ​ရေးအသင်း(ပိန္နဲကုန်း) မင်းကိုကိုထွန်း / Bo Win
၁၀တနျးစာမေးပှဲနောကျဆုံးနမှေ့ စာမေးပှဲဖွပွေီးလို့ကြောငျးသူကြောငျးသားမြား ဘားအံမွို့ရသပွေ့နျဂူသှားရောကျစဉျ ဂူတောငျပျေါမှကြောကျခဲပွုတျကပြွီး မမွငျ့မွငျ့သူအား ထိမှနျသှားရာ ဘားအံဆေးရုံမှ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးသို့သှားရောကျကုသသောလဲ ထိခိုကျဒဏျရာပွငျးထနျ၍ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးတှငျ သဆေုံးသှားခဲ့ပါသညျ..
ကြိုကျမရောမွို့နယျ ပိနျးနဲကုနျးကြေးရှာအုပျစု ကငျးစုရပျမှ ကှယျလှနျသူမမွငျ့မွငျ့မျော(အ.ထ.က ပိနျးနဲကုနျး ဒသမတနျး) အသကျ (၁၆)နှဈကိုလူမှုကူညီရေးအသငျး (ပိန်နဲကုနျး)က ကှယျလှနျသူနှငျ့ဆိုငျသောအသုဘကိစ်စရပျမြားကို ကုသိုလျပွုဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါသညျ…
လူမှုကူညီရေးအသငျး(ပိန်နဲကုနျး) မငျးကိုကိုထှနျး / Bo Win
မန္တလေး မဟာမုနိဘုရားကြီး၏​တောင်​ဘက် ဦးပွားဘုရား​မှ မျက်​နှာပုံ​ပေါ်​နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…!
This Month : 37266
This Year : 232664
Total views : 2714494